Rivo Rakotovao : Voatendry ho loholona nisolo an’i Ahmad -
AccueilRaharaham-pirenenaRivo Rakotovao : Voatendry ho loholona nisolo an’i Ahmad
18/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Araka ny didim-panjakana laharana 2017-954 hanendrena ireo mpikambana ao amin’ny Antenimieran-doholon’i Madagasikara avy amin’ny Filohan’ny Repoblika, dia voatendry ho loholon’i Madagasikara Rakotovao Rivo. Ny sekretera jeneraly eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika, no namaky izany teny Iavoloha. Minisitry ny Fambolena moa ny tenany teo aloha, ka tamin’io omaly io ihany dia voatendry ho minisitry ny Fambolena handimby azy Randriarimanana Harison Edmond.
Omaly ihany koa dia efa nampahafantarina teo anivon’ny fanokafana ny fivoriambe faharoan’ny Antenimieran-doholona ny fahazoany mpikambana iray vaovao. Ity Andrim-panjakana ity moa dia banga toerana iray, dia tsy iza izany fa ny toeran’ny senatera teo aloha Ahmad, izay lasa filohan’ny Caf. Rivo Rakotovao araka izany no nameno izay banga izay.
Raha ny fanazavan’ny mpahay lalàna, dia feno tanteraka ny fepetra rehetra nanoloana ny toeran’ilay senatera banga, izay voalaza etsy aloha. Voahaja ny andinin-dalàna isan-tsokajiny mifehy izany. Efa tokony ho tamin’ny 12 oktobra teo moa no nanaovana ity fanendrena ity saingy noho ny toe-java-misy nisy teto amin’ny firenena, dia notontosaina mirazotra niaraka tamin’ny fisokafan’ny fivorian’ny Antenimiera roa tonta izany.
Tafiditra indrindra amin’ny fiatrehana ny ho avy tsaratsara kokoa ho an’ity firenena ity, izao fampidirana mpikambana vaovao izao.
Ankoatra ny naha minisitra dia filoha nasionalin’ny Antoko Hvm, Rivo Rakotovao, izany hoe mahalala ny hitondrana ny lalan’ny fampandrosoana andraisan’io Andrimpanjakana vaovao misy azy io.
Tsy re feo mihitsy ny lehiben’ny Governemanta manoloana tsy fandriam-pahalemana mahazo vahana ankehitriny.Sa efa tsara mpiambina ka tsy miaina ny tahotra sy ny horohoro iainan’ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao? Iaraha-mahita anefa fa feno habibiana ...Tohiny